नेपालमा झन्डै सात लाखले लगाए पूर्ण खोप, उनीहरूले मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन ? - Sankalpa Khabar
नेपालमा झन्डै सात लाखले लगाए पूर्ण खोप, उनीहरूले मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म २४ लाख २२ हजार जनाभन्दा केही बढी मानिसले कोभिड खोपको पहिलो मात्रा प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो मात्रा प्राप्त गर्नेको संख्या ६ लाख ९१ हजार चार सय ९४ जना छ । अर्थात् कूल जनसंख्याको ६.४ प्रतिशत नेपालीले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् । यो संख्या दक्षिण एसियामा श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्सपछिको हो ।
समुदायमा जति धेरै मानिसले दोस्रो खोप लगाउँछन् त्यति नै कोरोना संक्रमण फैलिन पाउँदैन । पहिलो खोप लगाउने २५ लाख पुगेका छन् । २० लाख मानिस दोस्रो खोप लगाउन पालो कुरेर बसेका छन् ।
अमेरिका र चीनमा दोस्रो डोज खोप लगाउनेको संख्या धेरै भएकाले मास्क नलगाए पनि हुने नियम बनाइएको छ । नेपालमा लगाइएका खोपहरूको प्रभावकारिता कति छ र तिनले कति एन्टिबडी बनाए भन्ने कुरा हेर्न सकिने अवस्था नरहँदा नेपालमा ढुक्कसँग मास्क नलगाउन सिफारिस गर्न नसकिने इपिडियोमोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका (ईडीसीडी) पूर्वनिर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन्।
दुवै खोप लगाइएकालाई पनि फाट्टफुट्ट संक्रमण हुने, तर धेरै अप्ठेरो संक्रमण नहुने देखिएकाले पनि पूर्ण खोप लगाउने पनि मास्क लगाइराख्नु उचित हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ । दुवै मात्रा खोप लगाएका मानिसहरूको भेट हुँदा ‘मास्कको जरुरत कम पर्ने सक्ने’ चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर उनीहरू आफैँ संक्रमणका कारण बिरामी नहुने भए पनि अरूलाई सार्न सक्ने बताइन्छ ।
नेपालको ठूला सहर संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित स्थानमा पर्ने हुँदा यी क्षेत्रमा बस्नेहरूले सामान्य अवस्थामा पनि मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यस्ता ठाउँमा साधारण मास्क मात्रै नभएर एन९५ मास्क नै लगाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
३० भाद्र ०८:२४
३ आश्विन १५:१५
१ आश्विन १६:१७